Mibvunzo - FAQ - Timpson Welding Equipment Co, Ltd.
Nyorera kufa musoro?
Isa iyo yekutengesa muchina pane iyo yakamira, yakasarudza kufa musoro zvichienderana nehupamhi hwepombi, uye igadzirise pamushini. Mune yakajairwa, iyo diki magumo iri kumberi, iyo hombe magumo kumashure.
Simba (ita shuwa kuti simba rinofanirwa kunge riine leakage yazvino mudziviriri), iro girini girobhu uye mwenje mutsvuku uripo, mira kusvikira mwenje mutsvuku wadzima uye chengeta greenlight yakavhenekera, izvo zvinoratidza kuti muchina unopinda mumota tembiricha yekudzora modhi uye muchina unogona kuva kushandiswa.
Ongorora: panguva yemoto tembiricha yekudzora modhi, iyo tsvuku uye girini mwenje unenge uripo uye kudzima neimwe nzira, izvi zvinoratidza kuti muchina uri pasi pekutonga uye hauzokanganisa mashandiro.
Uchishandisa cutter kutema pombi yakatwasuka, pusha pombi uye kukodzera mumusoro wekufa pasina kutenderera. Bvisai ipapo ipapo kana nguva yekudziya yasvika (ona tafura iri pazasi) uye isa.
Dhayamita yekunze Kudziya udzamu Nguva yekupisa Maitiro nguva Nguva inotonhorera